Somaliland oo albabaada isu dhuftey xafiis u adeegayey DKMG dadna xabsiga dhigtey – SBC
Somaliland oo albabaada isu dhuftey xafiis u adeegayey DKMG dadna xabsiga dhigtey
Ciidamada Booliiska maamulka la magac baxay Somaliland ayaa hawlgal ay fuliyeen waxay albaabada isugu laabeen xafiis ku yiil magaalada Hargeysa oo dhawaan bilaabay in uu soo saaro baasaboorka cusub ee dawlada KMG Soomaaliya ee loo yaqaan E-Passpor.
Ciidamada ayaa xabsiga u taxaabay 3 nin ka soo jeeda gobolada Somaliland oo ku hawlanaa soo saarista baasaboorkan, sida uu xaqiijiyey taliye kuxigeenka ciidamada Booliiska Somaliland C/raxmaan Fooxle.
Warka ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in ciidamada Booliisku sidoo kale ay qaateen dhamaan qalabkii yiil xafiiskaasi sida Kaamirooyinkii & Kumbuyutaradii loo adeegsanayey bixinta baasabadarada, sidoo kale waxay qaateen dukumintiyo iyo waraaqo.
“Mudo ayeynu ku dabajirney warka xafiiskan waxaana markii ay xaqiiqsadeen ciidamada Booliisku in xafiiskaasi uu ku jiro hawlaha soo saarista baasaboorka Soomaaliya aynu ka qaadney talaabo, waxaanu qabanay sadex nin, isla markaan waxaynu horkeeni doonaa cadaalada” ayuu yiri C/raxmaan Fooxle oo u waramayey wariye ka tirsan SBC.
Suleekha Ducaale oo ka mid ah dadka ku leh meherada ganacsi ku leh agagaaraha xafiiskaasi ayaa u sheegtey SBC in ciidamada Booliiska & maamulka Somalilandba ay ka warqabeen mudooyinkii ugu dambeeyey in xafiiskaasi uu ka furan yahay magaalada Hargeysa, waxayna ku tilmaamtey hawlgalka xiligan mid la isaga leexinayo cambaareyn ka dhalatey xafiiskaasi oo loo jeediyey maamulka Somaliland.
Goor sii horeysay mausuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland ayaa beeniyey in ay ka warhayaan xafiiskaasi waxaana ka mid ahaa Maxamuud Raage oo ka tirsan wasaarada arimaha dibada Somaliland oo beeniyey inaanay ka warheyn xafiis caynkaasi ah oo Hargeysa ka furan ama ay siiyeen ogolaansho, sidoo kale Maxamed Cismaan Caalin oo madax u ah laanta socdaalka Somaliland ayaa geestiisa wuxuu doc isaga riixay in jiritaanka warkaasi isagoo beeniyey waxaana uu sheegay inaanay dhici karin in xafiis u adeegaya dawlada Sheekh Shariif sida hadalka uu u dhigay aanu ka shaqeyn karin magaalada Hargeysa & guud Somaliland.